I-Aloe vera, umthombo kaMeyian wobusha - I-Afrikhepri Fondation
ngolwesithathu, ephreli 14, 2021
Isitshalo se-aloe vera
I-Aloe vera, umthombo wobusha waseMayan
Funda: 4 amaminithi
Thei-aloe vera noma i-aloe ayi isitshalo zisetshenziswa ngaphandle kwesiqu, ezinezimfanelo ezihlukile. Siqoqa ezingxenyeni eziluhlaza, uginindela ocacile obukeka njengejeli ngezenzo zokwelapha kanye nokusetshenziswa kwangaphakathi njengokusebenzisa kwangaphandle. Amanqamu, eczema, izinkinga ezingapheli zokugaya ukudla ... I-aloe vera ibonakala inezimpawu zazo zonke izifo (njengengxenye yokudla nsuku zonke imithi enikezwe udokotela nangemuva kokumcela izeluleko ngobungozi bokusebenzisana phakathi kwabo i-aloe vera).
I-aloe vera, isitshalo esiyisimangaliso?
I-aloe vera, isitshalo esinobuhle obuningi
Ayigqugquzeli amasosha omzimba kuphela, iyaphilisa kepha futhi isebenza njenge-antibiotic kanye ne-anti-inflammatory. I-Aloe vera igqugquzela ukuqedwa kobuthi futhi iqeda amajaqamba esiswini kanye nezisu eziphazamisayo. Ngaphezu kwalokho, lesi sitshalo esimangalisayo sinconyelwa abanesifo sikashukela, nabantu abaphethwe ukwaliwa, ukuqunjelwa, izinkinga zenhliziyo ...
Ngamafuphi, i-aloe vera iyikhemisi elincane elincane: likhiqiza izinto eziningi ezisebenzayo, kufaka phakathi amaminerali, ama-enzyme, amavithamini nama-mucopolysaccharides, njengoba sizobona.
Kunezinhlobo ezingama-300 zekhala. Okusetshenziswa kakhulu yi-aloe vera ngenxa yezinzuzo zayo futhi ikakhulukazi ukulula kwayo okulinywayo. Ekuqaleni ivela eNingizimu Afrika, i-aloe vera itshalwa emhlabeni wonke, ikakhulukazi eSpain, eMexico kepha naseningizimu ye-United States.
Amaqabunga mancane, made futhi anezinyo. Kusukela maphakathi nendawo kuphakama i-inflorescence enezimbali eziningi eziphuzi, ezimise okwe-tube. Ekupheleni kweminyaka emi-4 kuye kwengu-5, umdolofiya ufinyelela cishe kumitha elilodwa: umuntu angaqala ukuthatha amaqabunga awo ukwenza amakhambi noma izimonyo.
Abanduleli bemithi yamanje njengoPliny Omdala, u-Aristotle noHippocrates base bevele bezitholile izimfanelo eziningi zalesi sitshalo. Bayisebenzisele ikakhulukazi:
Thuthukisa ukugoqa igazi,
Ukusiza amathumbu angenasisekelo,
Philisa ukushaywa kanye namanxeba,
Ukuze uthole izinzuzo zayo isikhumbakokubili ukuphulukisa nokulihlekisa.
Ngaphezu kwalokho, uCleopatra akazange azincishe izakhiwo ezihlukile zalesi sitshalo ukuze aphelelise umlando wakhe ubuhle !
AmaMaya abize lesi sitshalo ngokuthi umthombo wobusha kanye "nomthombo wobusha."
Iqabunga le-Aloe Vera liqukethe izakhi eziningi ze-75 nezinye izingxenye ze-200, kanye namaminerali e-20, i-18 amino acid kanye nama-vithamini e-12.
I-aloe vera kufanele igwenywe ngesikhathi sokukhulelwa futhiyokudla futhi akufanele inikezwe izingane ezineminyaka engaphansi kwengu-6.
I-aloe vera igcina umzimba kusuka ngaphakathi, ikakhulukazi ngokuhlanza uhlelo lokugaya kanye nomgudu womchamo.
Imikhiqizo ethile ye-aloe vera ikhuthaza ukusebenza kahle kwe-metabolism ngokushisa amanoni nokuqinisa ukuzivikela komzimba.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yezindawo zayo zokuphulukisa, amanye amaNdiya aze asebenzisa i-aloe gel ngqo emanxebeni avulekile, ngaphandle kokuwahlanganisa kuqala. Lokhu kuvumele ukuphulukiswa okuhle kakhulu, futhi, okushiye amamaki amancane kakhulu kunezitishi.
I-aloe yenza kube lula ukuvuselelwa kwamaseli nokuthambisa okuhle kwesikhumba
Ijusi le-aloe vera noma ijeli kungasetshenziswa uma kwenzeka ulimala ngenxa ye- ezemidlalo futhi ziyasebenza njengendlela yokwelapha yokwelapha
lokhu isitshalo Ngakho-ke kunconywa uma kwenzeka i-pruritus, eczema, ukusikeka okuncane, ukucasuka, izilonda ezibandayo, ukulunywa izinambuzane, inkwethu, izinwele ezilimele, ukulahleka kwezinwele, induna, i-cellulitis, njll.
Nsuku zonke, i-aloe vera iletha ukwanela nokuthamba esikhunjeni esonakele noma esomile.
I-Aloe Vera ingenye yezitshalo ezithembisayo kakhulu zokulwa nezifo zaseNtshonalanga kanye nokuvimbela umdlavuza.
NB: yi-aloe vera barbadensis miller esingayidla ngaphandle kwengozi (ngenkathi sihlonipha imithamo).
I-100% ye-Aloe Vera Gel Yemvelo - I-moisturizer enhle kakhulu ubuso nezinwele zomzimba - Ukwehlisa umoya ngemuva ...
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 14,79
Thenga i- € 14,79
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Ephreli 14, 2021 3:43 pm
Buka Yodwa Kuzo Zonke (2015)
Joyina i-afro yenethiwekhi yomphakathi
Kubaluleke kakhulu kosanda kuzalwa ukuthi bathathe ibele likamama lapho bezalwa
Ukholo lwezintombi: ekugcineni iqiniso